China Thyristor Tsanangudzo fekitari uye bhizimisi | Runau Electronics
1.IEC zviyero zvakashandiswa kuratidza iyo thyristor, diode performance, inoratidzira akati wandei gumi parameter, asi vashandisi vanowanzo shandisa gumi kana zvakadaro, chinyorwa ichi muchidimbu thyristor / diode yemakuru parameter.
2.Avhareji Yemberi Yazvino IF (AV) (inogadzirisa) / Inoreva pa-nyika yazvino IT (AV) (Thyristor): inotsanangurwa maererano neyekupisa singi tembiricha kana kesi tembiricha TC THS painobvumidzwa kuyerera kuburikidza neiyo yakanyanya hafu sine yedhizaini. wave iye zvino avhareji. Panguva ino, iyo tembiricha tembiricha yasvika yayo yepamusoro inobvumidzwa tembiricha Tjm. LMH Kambani Chigadzirwa Chinyorwa inopa yakaringana mamiriro azvino anoenderana neyekupisa singi tembiricha THS kana kesi tembiricha TC tsika, mushandisi anofanira kuve akavakirwa pane chaiye pa-nyika parizvino, uye mamiriro ekupisa kuti asarudze yakakodzera modhi yechigadzirwa.
3.Pamberi mudzi unoreva mativi akaenzana IF (RMS) (inogadzirisazve) / On-state RMS Yazvino IT (RMS) (Thyristor): inotsanangurwa maererano neyekupisa singi tembiricha kana kesi tembiricha TC THS painobvumidzwa kuyerera kuburikidza nehukuru hwechigadzirwa. inoshanda ikozvino kukosha. Mukushandisa, mushandisi achaona kuti mune chero mamiriro ezvinhu, RMS yazvino inoyerera kuburikidza necustomer kesi tembiricha haipfuure inoenderana mudzi inoreva mativi azvino kukosha.
4.Surge yazvino IFSM (inogadzirisa), ITSM (SCR)
Inomiririra inoshanda mumamiriro akasarudzika, chishandiso chinogona kumira pakarepo kuwanda kuwanda kwazvino kukosha. 10ms hafu sine wave ine yepamusoro iyo LMH inopihwa muchigadzirwa bhuku inrush yazvino kukosha ndiyo yakanyanya kubvumidzwa tembiricha tembiricha yechigadzirwa iri pasi pe80% VRRM yakaiswa pasi pemamiriro ehunhu hwekuyedza. Munguva yehupenyu yechigadzirwa inogona kumira iyo inrush yazvino inogumirwa nenhamba yevashandisi vari kushandisa vanofanirwa kuyedza kudzivirira kuwandisa.
5.Non inodzokororazve yepamusoro off-state voltage VDSM / Isinga dzokororwe yepamusoro reverse voltage VRSM: inoreva thyristor kana rectifier diode iri kuvharira nyika inogona kumira yakanyanya breakover voltage, kazhinji iine imwechete pulse kuyedza kudzivirira kukuvara kune chishandiso. Mushandisi mukuyedza kana kunyorera, acharambidzwa kune iyo voltage inoshandiswa kune chishandiso, kudzivirira kukuvara kune chishandiso.
6.Retetitive peak off-state voltage VDRM / Inodzokorodza yepamusoro reverse voltage VRRM: zvinoreva kuti mudziyo uri mukudzivirira nyika, iyo off-state uye inodzosera kumashure inogona kumira yakanyanya kudzokorora yepamusoro voltage. Kazhinji chishandiso hachidzokorore voltage 90% mucherechedzo (asiri-anodzokorora magetsi akakwira magetsi michina anotora mashoma akaratidzirwa 100V). Vashandisi vari kushandiswa vanofanirwa kuona kuti chero zvodii, haifanire kutendera mudziyo kuti umire iwo chaiwo magetsi anodarika ayo ekunze-nyika uye Anodzokorora epamusoro anodzosera magetsi.
7.Retetitive peak off-state (leakage) yazvino IDRM / Inodzokorora yepamusoro reverse (leakage) yazvino IRRM
Thyristor mukudzivirira nyika, kumira yakadzokororwazve yepamusoro kubva-mamiriro magetsi VDRM uye VRRM Inodzokororazve yepamusoro reverse voltage, iyo yekumberi uye yekudzosera kuyerera kuburikidza nechinhu chepamusoro peak kupera ikozvino. Iyi paramende inobvumidza chishandiso kuti chishande pasi pehukuru hwekupesana tembiricha Tjm kuyerwa.
8.Peak on-state voltage VTM (SCR) / Peak kumberi voltage VFM (inogadzirisa)
Inoreva chishandiso neyakafanogadzirirwa kumberi yepamusoro yazvino IFM (inogadzirisa) kana yepamusoro penyika mamiriro ITM (SCR) ndiyo yepamusoro voltage, inozivikanwa seye yepamusoro voltage kudonha. Iyi paramende inoratidza zvakananga hunhu hwechishandiso pane-nyika kurasikirwa, kuchikanganisa chishandiso pane-nyika chazvino chiyero chinzvimbo.
Mudziyo pamitengo yakasiyana yazvino pasi peye-nyika (kumberi) yepamusoro voltage inogona kuenzaniswa nechikumbaridzo chemagetsi uye yakatsiga resistor, ndokuti:
Mhanya kambani yeAustria mune bhuku rezvigadzirwa yemhando yega yega inopihwa muhukuru hwechigadzirwa pa-nyika (kumberi) pombi yemagetsi uye chikumbaridzo chemagetsi uye kuramba kutsiga, mushandisi anoda, iwe unogona kupa iyo mudziyo chikumbaridzo chemhepo uye iwo mutserendende wekuyera kupikiswa kukosha.
9.Circuit inoshandurwa kudzoka-nguva nguva tq (SCR)
Pasi pemamiriro ezvinhu akatsanangurwa, irwo ruzha rweiyo thyristor kumberi inodonhedza pamusoro pe zero, kubva zero kuyambuka kuti ugone kumira nehuremu hwemagetsi inoshandisirwa pachinzvimbo chekushandura yakaderera nguva yenguva. Thyristor yekudzima-nguva yakatarwa kukosha kunoenderana nemamiriro ekuyedza, Mhanya kambani yeAustria inogadzirwa nekukurumidza, yakakwira-frequency thyristor zvishandiso zvinopa nguva yekudzima yeumwe neumwe chiyero chakayerwa, haina kunyanya kutsanangurwa, mamiriro anoenderana ndeaya anotevera:
ITM-nyika yepamusoro yazvino yakaenzana nechishandiso ITAV;
On-state yazvino kuderera mwero di / dt = -20A / μs;
Inorema magetsi kuwedzera mwero dv / dt = 30A / μs;
Reverse voltage VR = 50V;
Tembiricha yeJunction Tj = 125 ° C.
Kana iwe uchida chaiyo mamiriro ekushandisa mune isiri-nguva bvunzo tsika, iwe unogona kukumbira kwatiri.
10 Yakakosha mwero wekukwira kweye-nyika ikozvino di / dt (SCR)
Inoreva iyo thyristor kubva ichivharira nyika kune iyo nyika, iyo thyristor inogona kumira yakanyanya mwero wekukwira kweye-nyika zvazvino. Iyo chishandiso inogona kumira pa-mamiriro azvino Kukosha mwero wekukwira di / dt gedhi rinokonzeresa mamiriro nekukanganisa kukuru, saka tinokurudzira zvakasimba kuti vashandisi vashandise iyo yekushandisa trigger, iyo trigger pulse yazvino amplitude: IG ≥ 10IGT; kupomba simuka nguva: tr ≤ 1μs.
10. Yakakosha mwero wekusimuka kwe-off-state voltage dv / dt
Pasi pemamiriro ezvinhu, hazvizokonzeresa thyristor kubva kuoff state kuenda kune iyo state inoshandura yakanyanya kubvumidzwa kumberi voltage kukwira kumhanya. Mhanya kambani yeAustria chigadzirwa chigadzirwa chinopa chidiki pane ese marudzi thyristor dv / dt kukosha, kana mushandisi dv / dt aine zvakakosha zvinodiwa, zvinogona kuitwa kana uchihodha.
11.Gate rinokonzera voltage VGT / Gedhi rinokonzeresa ikozvino IGT
Pasi pemamiriro ezvinhu akatsanangurwa, kugadzira thyristor kudzima-nyika neinodiwa mashoma magetsi gedhi uye gedhi razvino. Thyristor yakavhurwa panguva yekuvhura maawa, kuvhura kurasikirwa uye kumwe kuita kwesimba nekuisa mukati mayo gedhi inokonzeresa simba rechiratidzo pane rakakura maitiro. Kana mukushandisa kweinonyanya kutsoropodza IGT kumutsa thyristor, thyristor hairegi kuwana yakanaka yekuvhura hunhu, mune dzimwe nguva kunyange kukonzera kukundikana nguva isati yakwana kana kukuvara kune chishandiso. Naizvozvo zvakakurudzira kuti mushandisi application uchishandisa yakasimba trigger mode, iyo trigger pulse yazvino amplitude: IG ≥ 10IGT; kupomba simuka nguva: tr ≤ 1μs. Kuchengetedza kushanda kwakavimbika kwechigadzirwa, IG inofanira kunge yakakura kudarika IGT.
12.Crusts kuramba Rjc
Inotaura nezvechigadzirwa pasi pemamiriro ezvinhu, mudziyo urikuyerera kubva pamharadzano kusvika pakukwira kwetembiricha kukwira pa watt. Kuramba kweCrust kunoratidza kupisa kweiyo mudziyo, iyi paramende ine chakanangana nekukanganisa pachigadzirwa-nyika ratidziro yekuita. Mhanya kambani yeAustria chigadzirwa chishongedzo cheyakagadzika mativi kutonhora chishandiso chinoratidzira yakadzikama-mamiriro kupisa kweiyo semiconductor magetsi ma module, inopa iyo-yega-yakatenderedza kutonhora iyo inopisa kupisa. Vashandisi vanofanirwa kucherechedza kuti chikamu chakapetana cheganda chakapisa mhedzisiro chakakanganiswa nemamiriro ekumisikidza, chete zvinoenderana nebhuku rekurudziro yekumisikidza yekumisikidza simba kuitira kuona kupisa kwemudziyo kwechigadzirwa kusangana nezvinodiwa crusts.